जनता बैंकको २६.३९ प्रतिशतको प्रगति Bizshala -
काठमाण्डौ । जनता बैंक नेपाल लिमीटेडले चालु आर्थिक बर्षको दोश्रो त्रैमास अवधिमा २६.३९ प्रतिशतको प्रगति हासिल गरेको छ ।
बिहीबार जारी दोश्रो त्रैमासिक विवरणका अनुसार बैंकले खूद मुनाफा अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अवधिको १० करोड ९२ लाखबाट बढाएर १३ करोड ८० लाख पुर्याएको छ ।
यसैगरी, जनताले बैंकले खूद ब्याज आम्दानी ३४ करोड ८२ लाख रुपियाँ आर्जन गरेको छ । ब्याज आम्दानी अघिल्लो आ.ब.को सोही अवधिमा चाहि ३१ करोड ३७ लाख मात्र थियो । बैंकले पुस मसान्तसम्ममा २३ अर्ब १३ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ । अघिल्लो आ.ब.को सोही अवधिमा बैंकले २० अर्ब ७३ करोड मात्र निक्षेप संकलन गरेको थियो ।
यसैगरी, बैंकले १८ अर्ब ५० करोड कर्जा समेत प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो आ.ब.को यही अवधिमा चाहि बैंकले १८ अर्ब ४१ करोड कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।
यसैबीच, बैंकको निस्क्रिय कर्जा(एनपिएल) दर भने चालु आ.ब.को दोश्रो त्रैमासमा केही बढेको छ । अघिल्लो आ.ब.को यही अवधिमा ०.८६ प्रतिशत रहेको एनपिएल यो बर्ष चाहि बढेर १.३८ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले प्रतिशेयरतर्फ १३.४० रु. आम्दानी गरी प्रति शेयर नेटवर्थ १२१.१६ रु. पुगेको छ ।
जनता बैंक र माछापुच्छे बैंक मर्जरको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन् । उनीहरुले डीडीए समेत सम्पन्न गरिसकेका छन् भने माछापुच्छे र जनताबैंकबीचको शेयर स्वाप रेसियो १२१ः८५ कायम भएको छ ।